Qaar ka mid ah xilhibaanada Hirshabelle oo ka soo horjeestey -
Home Somali Qaar ka mid ah xilhibaanada Hirshabelle oo ka soo horjeestey
Qaar ka mid ah xilhibaanada Hirshabelle oo ka soo horjeestey
Qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka Hirshabelle gaar ahaan kuwa ka soo jeeda degmada Buuloburte ayaa ka soo horjeestey shir dib u heshiin ah oo la qorsheynayo in uu ka bilowdo magaalada Buuloburte.
Shir jaraa’id oo ay qabteen xildhibaanadan ayaa waxaa ay ku sheegeen in ay tahay sharci darro in xilligan dad meel la isugu keeno maadaama uu jiro cudurka Coronoviruska oo ah cudur faafa.
“Degmada Buuloburte waa mid degmo go’odoon ku jirta waana mid ka soo horjeeda go’aanada dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dowlada federalka oo ah in aan dad badan meel la isugu keeni karin xilligan uu jiro cudurka Coronaha.”ayuu yiri xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim.
Sidoo kale xildhibaanadan shirka jaraa’id qabtay ayaa waxa ay dhaliileen wasaarada dib u heshiisiinta oo qorsheynaysa in shir ay ka bilowdo magaalada Buuloburte.
“Dib u heshiisiintu waa wax wanaagsan laakiin markahore waa in lagala tashadaa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka isla markaana la ogaado ajandayaasha shirka.”ayuu yiri Muxumad Colaad Cabdi oo ka mid ahaa xildhibaanada qabtay shirkan jaraa’id.
Ugu dambeyntii Xildhibaan Maxamed Siyaad Barqadle oo ka hadlay shirkan jaraa’id ayaa ku baaqay in xilliyadan uu jiro cudurka Coronaha aan hal meel la isugu keenin dadweyne faro badan.
Magaalada Buuloburta ayaa waxaa ka taagan khilaaf dhinac dhismaha maamulka deegaanka waxana hore u tegey magaalada Buuloburte madax ka tiran dowlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Hiiraan.
xildhibaano qabtay shir jaraaid